असार २, दैलेख । गुराँस गाउँपालिकाका बालबालिकाले रू. १ करोड ५० लाखको वार्षिक योजना तयार पारेका छन् । गाउँपालिका भित्रका सबै बालबालिकाको आवाजलाई समेट्दै उक्त योजना तयार पारिएको हो । गुराँस गाउपालिकाले आयोजना गरेको बाल भेलामा बालबालिकाले आफ्नो योजना आफैं बनाएका हुन् । बाल उद्यान, विद्यालय तथा समुदायमा...
सुर्खेत । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सुर्खेतमा ३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । जेठ सकिनै लाग्दा आएको बजेटलाई असार मसान्तअगावै कसरी सक्ने भनेर जनप्रतिनिधिहरू बहाना खोजिरहेका छन् । ५ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका रहेको सुर्खेतमा अहिलेसम्म सो कार्यक्रमअन्तर्गत...
असार १, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट भइरहेको अनर्गल प्रचारबाजीले जनतामा निराशा छाएको बताएका छन् । सिभिल बैंकको कर्णाली प्रदेश कार्यालय आइतवार उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले नेतृत्वका विरुद्ध भ्रम सिर्जना गरी संघीयता नै ठीक छैन भन्ने जनमत...
त्रिदेशीय सडकखण्डमा ५२ करोड बजेट, महावुको अवस्था फेरिएला !
जेठ ३१, दैलेख । कर्णाली राजमार्ग सञ्चालन भएको लामो समय भैसक्दा पनि राम्रोसँग स्तरोन्नति भने हुन सकिरहेको छैन । सुर्खेतदेखि जुम्लासम्मको यो सडकखण्ड मृत्यु मार्गको नामलेसमेत परिचित छ । भौगोलिक रुपमा विकट क्षेत्र कर्णालीमा निर्माण भएको यो सडक अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ । तर अब उक्त सडकभन्दा ७९ किलोमिटर छोटो...
सल्यान । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सल्यानको दार्मा गाउँपालिकामा १८० जनाले रोजगारी पाएका छन् । गाउँपालिकाले उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि केन्द्र सरकारबाट २९ लाख बजेट पाएको छ । प्रत्येक वडाबाट ३० जनाका दरले छनोट गरिएको हो । छनोट भएकाहरूलाई ६ ओटा आयोजनाको काममा लगाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्...
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अभियान : दूध, पानी र तेलमा समस्या
सुर्खेत (अस) । सरकारले ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर’ अभियान सञ्चालन गरे पनि दूध, पानी र तेलमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको सुर्खेतका उपभोक्ताले बताएका छन् । यस्ता उपभोग्य वस्तुको स्वच्छता एवं गुणस्तर कायम गर्न सरकारी अभियान असफल रहेको उनीहरूको आरोप छ । नेपाल एग्रिबिजनेश इन्नोभेशन सेन्टरद्वारा मंगलवार स...
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका कृषकले वास्तविक ‘कृषक परिचय पत्र’ जारी गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । कृषकका नाममा तथाकथित टाठाबाठाले राज्यबाट उपलब्ध अनुदान सहयोग लिने थालेपछि वास्तविक कृषक मर्कामा परेको उनीहरूले बताएका हुन् । कृषक समूह महासंघ र मानव अधिकार निगरानी समूहले मंगलवार कर्णाली प्रदेशको...
सल्यानमा संघीय सरकारको २ अर्ब ३८ करोड बजेट
सल्यान (अस) । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सल्यानका १० ओटा स्थानीय तहलाई २ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आवमा जिल्लाको बजेट चालू आवको भन्दा बढी विनियोजन भएको छ । चालू आवमा सल्यानमा २ अर्ब १४ करोड ९३ लाख विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आवमा जिल्लाको शारदा नगरपालिकालाई स...
सुर्खेत । सुर्खेतमा पछिल्लो समय आयुर्वेदिक चिकित्साप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको छ । प्रदेश आयुर्वेद औषधालयले प्रचार–प्रसार बढाएपछि यो चिकित्साका प्रयोगकर्ता बढेका हुन् । जिल्लामा प्रदेश आयुर्वेद औषधालयसँगै जिल्लाभर रहेका आयुर्वेद औषधालय तथा गाउँमा हुने निःशुल्क शिविरमा सेवाग्राहीको घुइँचो लाग्ने...
सुर्खेत । औषधिको व्यापारबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि सुर्खेतको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरलगायत ग्रामीण क्षेत्रमा धमाधम अवैध रूपमा औषधि पसल खुल्ने क्रम बढ्न थालेको छ । औषधि व्यवस्था विभागबाट नियमित अनुगमन नहुँदा नयाँ औषधि पसल खुल्ने क्रम बढेको हो । जिल्लाको पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रमा दिनानुदिन च्याउ उ...